Semalt Kudzidza: Ndezvipi Zvinobatsira Dhizimusi Kudzingisa Nyanzvi Vanopa Kwazvo
Sangano rakanaka rekutengesa rinofanira kukwanisa kubatsira bhizimusi rako reCommerce kukuranekukurumidza nekuderedza kushungurudzika kupi zvako iwe ungave uine. Zvakasikwa kuti vashandi vebhizimisi vanoda kufambisa makambani avo, kuwedzera zvakawandakutengesa uye kusvika pakuita zvinzvimbo mune imwe niche yekudhinda.
Sezviri pachena, unoda rubatsiro pane dzimwe nguva. Hiring a digital marketingsangano rinofanira kuva nzvimbo yakanaka yekutanga. Jason Adler, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira we Semalt inotsanangura kuti zvipi zvingakubatsira zvingakubatsira kana iwe ukashandisa nyanzvi dzedikiti - vps unmetered bandwidth hosting companies.
Zvose zvinoshandiswa pakudhinda zvinoshandisika pakugadzira, kutenga uye kutengesamotokari kunzvimbo yaidiwa. Sei vakanaka? Zvakanaka, ndezvikonzero zvezvikonzero zvina:
Chiitiko. Kuva neruzivo rwakakura rwokushanda nemakambani akasiyana,kambani yenyu yekudhinda ingadai yakaona dzakawanda zvekubudirira kwemishandirapamwe.
Sangano. Iwe uchawana mushumo wakadzama pamusoro pekuti zvakadini zvakashandiswa purojekiti
Nguva yakakodzera. Zviponese pachako nguva inokosha nekuita kuti vashandisekutengesa zvimwe zvebhizimisi apo iwe unoronga zvimwe zvose.
Economics. Sezvo vangave vari kutenga matengesa akawanda kareiwe unobatanidzwa, ivo (iyo masangano) vanogona kuwana mairi ari nani.
Sezvo zita racho rinoratidzira, kutengeserana kwezvinhu zvinotarisana nekusika mavara, mavhidhiyouye zvinyorwa zvino zvichizviparidzira nechinangwa chekukwezva, kubatanidzwa nekushandura vafambi vachienda kune vatengi. Munyika yanhasizvinyorwa zvekutsvaga zvinoshandiswa nechinangwa chokufukidzira vatengesi, kugadzirwa kwezvinhu zvinogadzira kukosha. Ndiyo basa rekutengesahurumende yekuumba zvitsva, zvinonakidza uye zvinonakidza zviripo kwauri.
Iyi nzira yekutsvaga haina kumboshandiswa zvizere nemabhizimisimisangano yebazi rekutengesa raunogona iwe unogona kuvimbiswa zvibereko zvakanaka. Ingoita rondedzero yezvinofanira kuitwa uye iwesangano richakugadzirisa iwe.
Zvakajairika kuti mabhizimisi aite mapeji evanhu vehupenyu - peji Facebook, aYouTube channel, Google+ kana Twitter. Kuvandudza mapeji aya nguva dzose ndeyomusoro, izvo zvinokwanisika kukundarubatsiro rwebazi rekutengesa.
Nzvimbo yekugadzira nekugadzirwa kwezvinhu
Vashambadziri vanoita bhizinesi nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Vamwe vanoita izvozvo nokutivanogona, uye vamwe vanozviita nokuda kwezvimwe zvikonzero zvakanaka. Zvinosuruvarisa, haasi munhu wose ane unyanzvi hwokuumba yake / webhusaiti yakemaonero akanaka ekuvapo kweIndaneti (web design). Kana iwe uri newbie, saka sangano rinofanira kukubatsira iwe.
Videography uye kupikisa zvakakosha kana zvasvika pakutengesa zvinhu paIndaneti.Funga nezvenyaya iyo munhu asingashandisi ruzivo pamusoro pekuti chibereko chinoratidzika sei - chifananidzo kana vhidhiyo zvino inofanira kuuya zvakanaka.Izvi zvichaitwa zvakakwana nesangano rakanaka rekutengesa.
Kuchinja kwehuwandu hwekushandura (CRO)
Kune mazana emasangano ekutengesa ari kupa CRO. Izvi (CRO)kunotsigira kuedza pamwe nekuunganidza deta kuchinjwa kwehutano hwehutano hwakashandurwa kuva mutungamiri. CRO inyanzvi mune zvakasikwa, sakainoda unyanzvi hwemhizha kuti huitwe.
Sezvo bhizinesi richikura, iwe uchasangana nematambudziko akawanda. Forchiitiko, sezvo iwe uchitengesa zvimwe zvekutengesa, iwe unowana zvakawanda zvevashandi dadi mabasa. Uine ruzivo rwakakura rwemiti, unowana mamwe mazano kunechengetedza. Kanda mune dzakawanda kusarudza kushambadzira ,SEO updates, social media marketing marketing uye iwe uchawana mufananidzo wakazara.